प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिएकी समिक्षालाई आफ्नो भन्दा ओलीकै चिन्ता, चिकित्सकलाई सोधिन् ‘मामालाई कस्तो छ’ ? – " कञ्चनजंगा News "
काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो मिर्गौला दिएकी समीक्षा संग्रौला यतिबेला अस्पतालमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी छन् । उनले नाताले मामा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिने निर्णय गर्दै भनेकी थिइन्, मैले मामाको मुख हेरेर होइन राष्ट्रका लागि मिर्गौला दिने निर्णय गरेकी हुँ ।
आफ्नो मिर्गौला दिने त्यती ठूलो निर्णय गरेकी समीक्षाले शल्यकृया पछि होसमा आउना साथ पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिइन् । उनले बिहीबार बिहान चिकित्सकलाई सोधिन्– मामालाई कस्तो छ ? स्वास्थ्यलाभ गर्दै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार झोल कुरा खान सकने भएकी समीक्षालाई आफ्नो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यको चिन्ता धेरै थियो । उनले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा चिकित्सकलाई सोधिनन्, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा जिज्ञासा राखिन् ।